﻿	IUD ထည့်တာက နာမလား။ | Find My Method
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ဟော်မုန်းမဟုတ်သော IUD » IUD ထည့်တာက နာမလား။
မထည့်မီကထဲက ibuprofenအကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ကို ကြိုသောက်ထားပြီး သင်၏သားအိမ်ခေါင်းပွင့်ချိန် ဥပမာ ရာသီလာစဥ် (သို့) မျိုးဥကြွေစဥ်အချိန်တွင် IUD ထည့်သွင်းစေနိုင်သည်။ နာကျင်မှုအချို့ရှိလျှင်ပင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်ဝန်ကင်းသောလိင်ဆက်ဆံရေးအတွက် အကျိုးရှိသည်။
Tudorache, et al. (2017). Birth Control and Family Planning Using Intrauterine Devices (IUDs). မှရယူရန် https://www.intechopen.com/books/family-planning/birth-control-and-family-planning-using-intrauterine-devices-iuds-